ရွှေဥသြ: May 2008
အမေ....၊ နာဂစ်နှင့် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဇာတိမြို့ကလေး
အခုဆို ကျနော့်ဇာတိမြို့ကလေးကို ကျနော် ပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်မက ကြာခဲ့ပါပြီကော။ ကျနော်ငယ်ငယ်က အမေရိုက်ပြီး အတင်းပို့ခဲ့ရ တဲ့ မူလတန်းကျောင်းကလေးရော ရှိသေးသလားအမေ။ ကျောင်းရှေ့က ကုက္ကိုလ်ပင်တန်းကတော့
ကျနော်ရှိကတည်းက သူတို့ ခုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ကျ နော်မှတ်မိနေပါတယ်။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး အပြီးမှာနော်။ အမေ မှတ်မိတယ်မလား။ အဲဒီတုန်းက အမေက ကြောက်လိုက်တာ တုန်နေတာပဲ။ သေနတ်သံ တွေကလည်း ခြားခြားပြီး ပစ်နေတာမလား။ အပ်တိုတချောင်းတောင် ကိုင်ဆောင်မထားတဲ့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားကလေးတွေရဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို ဗိုလ် နေ၀င်းတပ်တွေက ပစ်ခတ်စီးနင်းနေတာလေ။ အဖေကတော့ ခြင်ထောင်ထဲကနေ ဘီဘီစီကို မပျက်မကွက် နားထောင်လို့ပေါ့။ အမေကတော့ ကြောက်လွန်းလို့ အဖေ့ကို တဆူဆူလုပ်လို့။ အဖေက ကျနော်တို့ကို တနိုင်ငံလုံးရဲ့ လူထုအုံကြွမှု သတင်းတွေ လာလာပြောလိုက်၊ ပြန်နားထောင်လိုက်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေက အဖေ့ကိုပြောခဲ့တဲ့ ဆူဆူပြောပြော စကားလေး ကျနော် ခုထိ မှတ်မိနေသေးတယ်။
"တော် ... နော် …. ကလေးတွေကိုမြှောက်ပေးနေ"
အဖေကတော့ပြုံးပြီး အမေ့ကိုကြည့်လို့။ ကျနော်တို့မိသားစုလေးရဲ့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ဘ၀ရင်ခုန်သံလို့ ပြောရင်ရမလားပဲနော်။ နောက်တော့ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုက သစ်ပင်တွေကိုခုတ်ပစ်လိုက်တာ တမြို့လုံး ကန္တာရလိုဖြစ်သွားတော့တယ်။ မြို့ကလေးကို တည်စကတည်းက မြို့ကလေးနဲ့အတူ စိုက်ခဲ့၊ ပျိုးခဲ့ရတဲ့ နေပြောက်မထိုး အရိပ်ရကုက္ကိုလ်ပင်ကြီးတွေခမျာ မျက်စိရှေ့မှာတင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ။ ဘာဖြစ်လို့ ခုတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ ပထမတော့ နားမလည် ဘူး။ အာဏာပိုင်တွေအတွက် အိမ်မှာထင်းစိုက်ဖို့လားပေါ့။ တကယ်လဲ ထင်းအဖြစ်ရောင်းခဲ့တာပဲလေ။ ဒါလောက်တောင် အောက်တန်းကျရသလား။ ဥတုရာသီ တောကိုမှီဆိုတာ ကလေးကအစ သိနေတဲ့ကိစ္စ။ လားလား ... နောက်တော့မှသိတယ်။ စစ်ရေးအရ ပြင်တာတဲ့။ သပိတ်စခန်းတွေကို သိမ်းစဉ်မှာ ကျောင်းသားနဲ့ လူထုက သစ်ပင်တွေကွယ်ပြီး ရရာလက်နက်နဲ့ခုခံခဲ့လို့တဲ့။ ဘယ်လိုလက်နက်တွေလဲဆိုတာ အမေလည်းသိပြီးသားပဲ။ လေးခွနဲ့ ဂျင်ဂလိလေ။
"ဒါလေးတွေများ ကြောက် ကြောက်တတ်ရန်ကော။ ဒါလောက်လေးနဲ့ သစ်ပင်တွေခုတ်ရတယ်လို့" အမကပြောတော့ အမေက...
"ညည်းဘာသိလို့လဲ လူထုက နောက်တခါကျရင် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ ဒင်းတို့ကို တိုက်ခိုက်လာမှာ ကြောက်လို့အေ့" တဲ့။
ဟုတ်တယ်အမေ။ အမေ ဒီစကားကို စိတ်ကူးယဉ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်သိတယ်။ အမေက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကို မီခဲ့တဲ့ မိန်းမ ကြီးပဲ။ အမေက ကိုယ့်နိုင်ငံလူထုအကြောင်းကို စာမတတ်ပေမဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုအရသိခဲ့တာ။
"ဘယ်တော့ တိုက်မှာလဲ အမေ" လို့ အမက အထွန့်တက်တော့ .....
"ကျုပ် အတတ်မပြောနိုင်ဘူး။ ညည်းမယုံရင် မသေအောင်လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်။ ဒီအတိုင်းဆို ဖြစ်မှာသေချာတယ်" အမေ့ကို ကြောက်လို့လား ဒါမှမ ဟုတ် တကယ်ယုံသွားလို့လားတော့ မသိဘူး အမဆီကအသံ တိတ်သွားတယ်။ အမေကပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကြီးကိုငေါ့ပြီး အဖေ့ကိုမျက်စောင်းလှည့် ထိုးလိုက် သေးတယ်။ အဖေကတော့ ပြုံးလို့ပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ယုံတယ်အမေ။ သေသေချာချာ သိနေလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားမှုကြောင့် လို့ဆိုရင် ရနိုင် မယ်ထင်တယ်။ အဲဒီခံစားမှုကြောင့်ပဲ ကျနော် ဇာတိမြို့ကို စွန့်ခွာခဲ့တာမလား။ အခုအထိပဲလေ။
"အခုလို သစ်ပင်တွေကို စည်းမရှိကမ်းမရှိ ခုတ်လှဲနေတာ မကောင်းဘူး။ နေပြောက်မထိုးတဲ့ ငါတို့ဒေသမှာ သစ်ပင်တွေ ကုန်သလောက်နီးနီးဖြစ်ကုန် ပြီ။ လံတွေပေးခုတ်၊မီးသွေးဖုတ်နဲ့ သူပုန်မခိုနိုင်အောင်လုပ်တယ်တဲ့ကွာ။ အံ့ပါရဲ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငါတို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဟာ အညာလွင်တီးခေါင်လိုဖြစ်နေ တယ်။ ရေငံလည်း တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်။ အဲဒါ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ဘူး။ အန္တရာယ်ရှိတယ်"
"ဘယ်လို အန္တရာယ်လဲ အဖေ"
"သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေပေါ့ ကွာ။ ရာသီဥတုတွေ ဖေါက်ပြန်ပြီး မုန်တိုင်းတွေတိုက်၊ ရေတွေကြီးနိုင်တာပေါ့။"
"ဒါဆို အစားအသောက်တွေ ရှားပါးကုန်မှာပေါ့နော်"
"ဘယ်ကမလဲသားရယ်။ လူတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေပါ အတိဒုက္ခရောက်ပြီး သေကုန်နိုင်တာပေါ့"
"တော်ကလဲ ကလေးကို ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ မဟုတ်က၊ ဟုတ်ကဟာတွေကို။ ဟဲ့ကောင်လေး သွား။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားဆော့"
အမေ့ တားမြစ်သံကြောင့် အဖေ ဆက်မပြောတော့။ အမေက အကင်းပါးလွန်းတယ်။ ညီလေးအရွယ်က ငယ်လွန်းနေတာကိုး။ တည ...
"အဖေ ..... ဟိုနေ့က ရာသီဥတုအကြောင်း ဆက်ပြောလေ"
"အေးကွာ။ ဒီအတိုင်းဆို မလွယ်ဘူးကွ။ လူဆိုတာ သဘာဝကို ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်တယ်။ တဆက်တည်းမှာ လူမှုစနစ် .... အေး ... မင်း တို့ငါတို့ကို အုပ်ချုပ်ချယ်လှယ်နေတဲ့ စနစ်တွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရတာမလား။ မင်းလည်း ခေတ်ပညာ အတန်အသင့်တတ်ထားတဲ့ကောင်ပဲ"
"အေး ဒီတော့ ကိုယ့်ကို အုပ်စိုးချယ်လှယ်နေတဲ့ လူမှုစနစ်ဟာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် မင်းတို့ ငါတို့ သဘာဝကိုရင်ဆိုင်ရတာ အားရှိတာပေါ့။ အေး ခေတ်စနစ်က မကောင်းရင် သွားပြီပေါ့ကွာ။ သဘာဝကလည်း နှိပ်စက်၊ လူမှုစနစ်ကလည်း နှိပ်စက်နဲ့ပေါ့။ ကပ်ဘေးဒုက္ခ တွေဆိုတာ ဘယ်တန်ခိုးရှင်ကမှ ဖန်တီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ ကောင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ခေတ်စနစ်တွေ မကောင်းရင်တော့ လူထုတွေခမျာမယ် မတွေးဝံ့စရာပေါ့"
"ဒါကြောင့် လူမှုတော်လှန်ရေးတွေ ပေါ်ပေါက်နေတာပေါ့နော် အဖေ"
"ဟေ .... အေး ..... ဟုတ်မှာပေါ့ သားရယ်။ ကဲ ကဲ အိပ်စို့ကွာ။ မနက်အစောကြီး ထရမှာ။ တော်ကြာ အဖွားကြီး၊ မင်းအမေ လာကောနေဦး မယ်။ သွား ... သားလဲအိပ်တော့။ ဟုတ်လား"
အဖေက ကျနော့်ကို အဓိပ္ပါယ်ပါပါ ကြည့်ရင်း အိပ်ယာထဲဝင်သွားတယ်။ အဖေက သူအသံထွက်ပြီး မပြောလိုတဲ့ စကားမျိုးကို မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲ နဲ့ ပြောနေကြ။ အမေကတော့ အဖေ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်။ အမေက စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြီး ပြောတတ်တယ်။ ဆူငေါက်ပြီးတော့ပေါ့။ လုပ်လို့မပြောဘဲ လုပ်ချင် လုပ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး။ မလုပ်စေချင်မှ ဘယ်သူမှမကြားအောင် ကြိတ်ပြောတတ်တာ မလား။ ကျနော် ထောင်ကျသွားတော့လဲ ....
"ဟဲ့ ဒါမျိုးလုပ်လို့ ထောင်ကျတာတော့ ငါဂုဏ်ယူတယ်" တဲ့။ ထောင်ကထွက်တော့ အမပြန်ပြောပြလို့သိရတာ။ ည ... ညတော့ ... ကြိတ် ... ငိုတယ် တဲ့။ ကျနော်က ဟုတ်လားအမေလို့ မေးတော့ .... အမေက
"အမလေး ... အမလေး .... ငိုမိပေါင်တော်" တဲ့။
"ဒါဖြင့် ငါးပိ၊ ငါးခြောက်ကလေးတွေ ကြော်လှော်ပြီး ပို့ပေးတာကရော"
"အမလေးတော် ဒါကတော့ ရှင်ငတ်ပြီးသေမစိုးလို့ပါ။ ရှင့်ကို မွေးထားတဲ့ တာဝန်ကရှိနေတယ်မလား"
"ဒါနဲ့ နေပါဦး။ နင် အခုတလော လမ်းသိပ်များနေတယ်။ ကြည့်လုပ်နော်။ နင်သွားတော့မလို့ လား .... ဟင်း"
ကျနော်က ဘာမျှ ပြန်မပြော။ အင်းလဲ မလုပ်။ ဟင့်အင်းဆိုပြီးလည်း မငြင်း။ အမေက သားအမိကြားလောက်ရုံအသံဖြင့် ......
"အေးလေ။ ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖြတ်ရှိမှလုပ်။ မလုပ်နိုင်လို့ ပြန်လာရင်လည်း နင်တသက်လုံး လူတောတိုးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ နင့်ကိုလည်းဘယ်သူကမှ ယုံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ တို့သေရင်လည်း နင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နင်နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ရင်လည်း ငါတို့ လာပြီးပြုစုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါထင်ပါ တယ်။ နင့်ပုံကြည့်ရတာ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပုံပါ"
ဟုတ်တယ်အမေ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ ဆုံးဖြတ်တာမှ အခိုင်အမာကို ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ ကျနော့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသံထွက်ပြီး အသိမပေးနိုင်ခဲ့။ ဒါကို အဖေ ရော အမေပါ နားလည်နိုင်မှာပါ။ ကျနော် ဦးချနှုတ်ဆက်တော့ အမေ့ခမျာ ကြိတ်လို့သာ ငိုနိုင်ရှာခဲ့တယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါ အမေ။
ကျနော် ဆယ်စုနှစ်မက စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ ဇာတိမြို့ကလေးကို နာဂစ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ ဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူ ပြန်ပြီးတွေ့လိုက် ရတယ်အမေ။ စစ်အုပ်စုရဲ့ မီဒီယာရုပ်မြင်သံကြား အစီစဉ်ကထုတ်လွှင့်နေတုန်း တွေ့လိုက်ရတာပါ။ ကျနော့်အထင် ဆယ့်လေးငါးစက္ကန့်ထက် မပိုဘူးထင်ပါတယ်။ ကျနော့် ဇာတိ မြို့ကလေးဆိုတာ ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါလေစအမေရယ်။ ဟယ်လီကော်ပတာပေါ်ကနေ ရိုက်ပြသွားတာ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ရွာပျက်နဲ့ မြို့ပျက်ကြီးတွေဟာ စစ်ကြောင့် ပျက်စီးနေတဲ့ မြို့ပျက်၊ ရွာပျက်တွေထက် ကြောက်စရာကောင်းလှချည်ရဲ့။ အိမ်တိုင်နဲ့ သစ်ပင်ငုတ်တိုတွေသာ ကျိုးတိုးကျဲတဲကျန်နေခဲ့တဲ့ အဲဒီဆိုးရွားလှတဲ့ အရပ် ဟာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အရပ်တဲ့လား။ တချိန်ကလူတွေ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ အရပ်ဆိုတာ သေချာရဲ့လား။ ဗမာပြည်ရဲ့ စပါးကျီအရပ်ဆိုတာ၊ ရွှေရောင်စပါးခင်းတွေနဲ့ သနပ်ခါးဘဲကျား လယ်သူမကလေးများရဲ့ အလှတွေ၊ ဘ၀တွေတည်ရှိရာ အရပ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့လား။ အဲဒီအရပ်မှာ ရာသီအလိုက် ပွဲတော်တွေ၊ အလှူအတန်း တွေ၊ စာအံသံတွေ၊ အားကစားပွဲတွေ၊ ဂီတ တူရိယာ အစုံအလင်နဲ့ တီးမှုတ်ကခုန်ခဲ့တာတွေ၊ ဘုရားသွားကျောင်းတက် ဇာတိပုည၊ လူမျိုးတမျိုးမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ ရိုးသားလှပ ဂုဏ်မာနတွေ ကျနော်တို့ ဇာတိမြေမှာ တချိန်ကရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့လို့ နှောင်းလူတွေကို ယုံတမ်းစကားအဖြစ် ပြောရတော့မလား အမေ။
ကျနော့် မျက်ဝန်းထဲမှာ မြို့ကလေးရဲ့ လက်ရှိအနေအထားကို မြင်နေရတယ်အမေ။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့ပျက်ကြီးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ရတဲ့ ကြီးကြီးမား မား ရှားပါးအဆောက်အဦကြီးတွေ။ သူတို့ခမျာလည်း စုတ်ပြတ်အသက်ငင်နေပြီပေါ့။ ကျနော်ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေကို အခြေခံပြီး ကျနော်တို့မြို့ကလေးမှာ အမိုးလန်ပြိုကျနေတဲ့ စာသင်ကျောင်း အချို့နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေသာ ရှိတော့တယ်အမေ။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ မသေဘဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သွေးပျက်ပြည် သူတွေရဲ့ ငတ်မွတ်ဆာလောင် ငိုကြွေးသံတွေနဲ့ ......။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ ခမျာလည်း ဒုက္ခသည်တွေ၊နောက်ဆက်တွဲ ကပ်ရောဂါတွေနဲ့အတူ သီလပေး သံတွေတိတ်ဆိတ်လို့။ အမိုးအကာမရှိတဲ့ အားကစားကွင်းထဲမှာတော့ ရွက်ဖျင်တဲကလေးတောင် ထိုးမနေနိုင်ရှာတဲ့ မိုးရေထဲက မြို့သူမြို့သားတွေနဲ့ ပြည့်နှက် ကြပ်သိပ် ...။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေလား။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကလည်း သွေးပျက်နေတဲ့ မိမဲ့၊ ဖမဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် ဆွံ့အငိုသံတွေကို တင်ဆက်ပြသလို့ပေါ့ အမေ ရယ်။ ကမ်နားလမ်းမှာတော့ ရူးသွပ်သွေးပျက်သွားတဲ့ မိခင်တွေလေ ..... စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ရေတွေကိုကြည့်ပြီး ..... ကျမတို့ ... ကျမတို့ကလေးတွေမှာ ဘာအပြစ် ရှိလို့လဲ ...... ကျမတို့ကလေးတွေ ..... ပြန်ပေး ... ကျမတို့ကလေးတွေ ပြန်ပေး .......
ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ... ဟုတ်လားအမေ။ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအနိုင်ကျင့် ပြည်တွင်းစစ်ပဲ တိုက်တတ်ခဲ့တာ။ ဘာလုပ်တတ်မလဲအမေ။ စေတ နာလား။ စေတနာကတော့ ပြည်သူသေသ ငါတို့စစ်အုပ်စုမာဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ကောင်တွေဆိုတာ အမေလည်းသိခဲ့တာပဲ။ နိုင်ငံတကာက ကူညီမယ်ဆိုတော့လည်း လက်မခံဘူးအမေ။ သူတို့ဆီက တဆင့်သွားရမယ်။ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။ သူတို့ကို တရားဝင်အစိုးရ အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရမယ်တဲ့လေ။ ကုလ သမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် အနောက်အုပ်စုကလည်း ခုပဲ အင်အားသုံးဝင်တော့မလို၊ အခုပဲ ဒုက္ခသည်တွေကို ဟယ်လီကော်ပတာ ထောင်ချီနဲ့ ကယ်တင်တော့မလိုလို နေ့ရွေ့ညရွေ့နဲ့ ဒုက္ခရောက်ပြည်သူတွေခမျာ အချိန်နဲ့အမျှ ရူးသွပ်၊ ငတ်မွတ်၊ သွေးပျက်၊ သေဆုံးနေရတယ်အမေ။ ဒီကြားထဲ စစ်အုပ်စု သကောင့်သားတွေက သူ တို့ မတရားရေးဆွဲထားတဲ့ (ဘယ်လူထုကမှ မထောက်ခံတဲ့) အခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ကလိန်ကကျစ်နည်းနဲ့ ဗိုလ်ကျကျင်းပ အနိုင်ယူသွားတယ်။ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းရုံတင်မက ပွဲလန့်တုန်း တရားဝင် အာဏာကို ဓါးပြတိုက်လိုက်တာပေါ့ အမေရယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အမေ။ အဖေ တခါကပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ လူသားဟာ သဘာဝတရားကို ရင်ဆိုင်၊ တွန်းလှန်၊ အနိုင်ယူရင်းက ကမ္ဘာမှာ လူသားအဖြစ်ရပ် တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ တဆက်တည်းမှာလည်း လူသားဟာ မတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ခေတ်ဆိုး၊ စနစ်ဆိုးကိုလည်း တွန်းလှန်အနိုင်ယူလို့ လူသားတယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်ရှင်သန်မှုနဲ့အတူ လူ့တန်ဖိုးကို ဖေါ်ပြတည်ဆောက်ဆောက်နေရတယ် မလား။ လူသားအဖို့ အဖျက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရရင် အပြုနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာပါ။ မတရားတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို တရားမျှတတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပုံဖေါ်ထုဆစ်ဖို့ဟာ လူသားရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ မကုန်မခမ်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေ တည်ရှိခဲ့၊ တည်ရှိဆဲ၊ တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစွမ်းအားကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် အမေ။ ကုလသမဂ္ဂပဲဖြစ်စေ၊ အနောက်အုပ်စုပဲဖြစ်စေ ကျနော်တို့ရဲ့ အပြစ်မဲ့ဒုက္ခသည်တွေကို ထိထိရောက်ရောက် အချိန်မီကူညီနိုင်မယ် ထင်ခဲ့တယ်အမေ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အဲဒီလိုဖြစ် မလာခဲ့ဘူး။ မသေသင့်၊ မဆုံးရှုံးသင့်တဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေသေဆုံးပြီးမှ ရောက်လာမယ်ဆိုလဲ ဒါကို အမျိုးသားကြေကွဲမှုနဲ့ ရင်းပြီးရလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေး မှုအသိ သင်္ခန်းစာလို့ မှတ်ယူလိုက်ပါမယ် အမေ။ တိုင်းတပါးအကူအညီနဲ့ ခေတ်၊ စနစ်တွေပြောင်းဖို့လား။ ပိုဆိုးတာပေါ့ အမေရယ်။ ကျနော်ငယ်ငယ်က အမေတောင်းကျွေးဖူးတဲ့ ဖိုးလမင်းဆီက ထမင်းဆီဆမ်း၊ ရွှေလင်းပန်းကမှ ရရင်ရဦးမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးလေးလူထုစိန်ဝင်းက ပြောခဲ့တာ။ ဘယ်တိုင်းတပါးကိုမှ မမျှော်နဲ့။ ကိုယ့်လူထု အင်အားနဲ့သာ စည်း စည်းလုံးလုံးတိုက်မှ ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့ အမေရယ်။ အော် အမေ မကြားလိုက်ဖူးနော် … အမေ
အမေ့အနေနဲ့ ဘယ်ကြားခွင့်ရှိတော့မလဲ အမေရယ်။ အမေနဲ့အဖေနှစ်ယောက်လုံး ဘယ်မှာကြားခွင့် ရှိနိုင်ပါတော့မလဲ။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတိ မြို့ကလေးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမေ့သား၊ သမီး၊ မြေး၊မြစ်တွေ ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာ အမေဘယ်သိနိုင်တော့မလဲ။ ဒီသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြီးက ဆိုးရွားလွန်း လှတဲ့ အနိဌာရုံကြီးတွေတောင် သူ့ကြောင့် ထိတ်လန့်ဆွံ့အသွားတယ် အမေ။ အကြေကွဲဆုံးဆိုတဲ့ ကြေကွဲမှုတွေကလည်း သူ့ကိုအရှုံးပေးပြီး သွေးပျက်တိတ်ဆိတ် လို့ နင်းစရာမြေတောင် မရှိတော့တဲ့ ဒေါသရေလွှာပြင်ပေါ်မှာ .....။
ကျနော်ဟာ အမေနဲ့ အဖေ့ ဈာပနကို အဝေးကနေ နောက်ကျကြားသိခဲ့ရသူပါ။ ခုချိန်ထိ ကျနော့မှာ သူတို့အတွက် သက်ပျောက်ဆွမ်းလေးတောင် ကပ်ခွင့်မကြုံသေးဘူ။ အဲဒီလို ပြုမူဆောင်ရွက်ပြီးရင် ကျနော့်အနေနဲ့ သူတို့အပေါ်တာဝန်ကျေပြီလို့ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် မသိစိတ်က ယူဆသွားမှာစိုးလို့လားမသိ တော့ပါဘူး။ အခု ကျနော်မြင်နေရတယ်။ ကျနော့်မိဘနှစ်ပါး အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းနေတဲ့ ကျနော့ဇာတိမြို့ကလေးရဲ့ တခုတည်းသောသုဿာန်က လေးခမျာ မုန်တိုင်းသင့် ရေလွှမ်းပျောက်ကွယ်သွားပါပကော။ အဖေနဲ့အမေရဲ့ မြေပုံမှတ်တိုင်ကလေးနှစ်ခုဟာ ကျိုးပျက်ပြီး အပြစ်မဲ့မြို့သူ၊ မြို့သား၊ ကလေးသူ ငယ်များရဲ့ ပုပ်ပွရုပ်အလောင်းများနဲ့အတူ ကူသူမဲ့၊ဆယ်သူမရှိ မျောပါနေပေါ့။ ဘယ်ကိုလဲ ... ဟုတ်လား။ အော် .... မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အရပ်ဆိုတာ ပင်လယ်ကိုမေး တင်ထားတဲ့ ဒေသမလား။ ဒီတော့ ပင်လယ်ဆီကို ရောက်ရင်လည်းရောက်မယ်။ လမ်းမှာတင် ပျက်သုဉ်းသွားရင်လည်း ပျက်သုဉ်းသွားမယ်ပေါ့။ နော် ... အမေရယ် .... နော်။ ဒါပေမယ့် အမေရယ်......
လူသားဆိုတာ ...........။ ။
ညွှန်းဆက် ၂၀၀၈၊မေ ၂၀။
Posted by ရွှေဥသြ at 06:280comments
(နာဂစ်၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် ဗီသိုဗင်) Nargis in Burma and Beethoven!!
Posted by ရွှေဥသြ at 06:080comments
Labels: ဓာတ်ပုံ ဆလိုက်ရှိုး
ဓနိတော၊ လမုတန်းနဲ့ 
အပြာစ အနီ စ အ၀ါစ
မင်းတို့ ငါတို့ လိုပါ
အနှောင်အဖွဲ့ တွေ ကာဆီး။
ရာဇ၀င်တွေလည်းမရိုင်းခဲ့ပါဘူး ကွာ ။
ဟဲ့အစိုးရ
ဒို့ တတွေ အတွက်လေ
အမျှဝေ မနေနဲ့ 
လက်စားသာ ချေလှည့်ကြတော့။ ။
(၁၀၊ ၅၊ ၂၀၀၈)
မှတ်ချက်။ ။ဒေါင်းအိုးဝေ၊အတွဲ(၁)၊အမှတ်(၆)၊ဧပြီ၊မေ၊ဂျွန် စာအုပ်တွင်
Posted by ရွှေဥသြ at 11:270comments
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်က ပညာရှိကြီးတယောက် ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ပညာတွေကို ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာ သိုမှီး ထားရတာများလွန်းလို့ ပေါက်မထွက်သွားအောင် ခါးပါတ်ကြီးနဲ့
ပါတ်ထားရတယ်ဆိုဘဲ။ ပညာတွေလား၊ ပဲဟင်းတွေလား။ စဉ်းစားစရာပါ။ ဆင်ဆိုတာကြိုးပါလား၊ သစ်ပင်ပါလား၊ ယပ်တောင်ပါလား ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဘယ်သူကမှ ရိုက်မစစ်ဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ၀န်ခံရမယ်ဆိုရင် ဒေါက်တာ ဦးတင်မောင်သန်းရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ကျော်ပြီးချန်ပြီး ဒီဗွီဘီကို နားထောင်နေတာကြာပါပြီ။ တစ်ခြားပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးတာထက် သူကပညာရှိလေသံ အပေါက် လွန်နေလို့ လားမသိ။ ပညာသိပ်မတတ်လှနဲ့ တောင်မရောက် မြောက်မရောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျုပ်အဖို့က လိုက်မမှီဖြစ်လိုက်၊ နား လျှံလိုက်၊ နားကလောလိုက်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒေါက်တာ ဦးတင်မောင်သန်းဟာ ထူးချွန်သော ပညာရှင်တစ်ယောက်၊ စာရေးဆရာ ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူကမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ချစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်း စားစေချင် တယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ယုံပါတယ်။
ဆရာရဲ့ ကြားမိတွေးမိသမျှ အစီအစဉ်က ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ ၂၀၀၈၊ ဒီဗွီဘီမှာ “လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ကန့်ကွက်မဲအ တွက် သော့ချက်ကျတဲ့အချက်ကို သုံးသပ်ခြင်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးချက်ဟာ ရာသီစာ၊ ဓာတ်စာဖြစ်နေတာမို့ တခုတ် တရ နားထောင်လိုက်မိပါတယ်။ နားထောင်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ “အော်၊ ဒါ့ကြောင့် ကုန်ရှုံးရင် တခါမှောက်၊ လင်ရှုံးရင် တသက် လုံးမှောက်၊ ဆရာမှားရင် တသံသရာလုံးမှောက်” လို့ ဆိုရိုးရှိပေတာပဲလို့ တွေးမိလိုက်တော့တာပါပဲ၊
ဆရာက လာမယ့်ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံကို သုံးပိုင်း၊ သုံးအုပ်စု ခွဲပြီးဆွေးနွေး ထားပါ တယ်။ ပထမအုပ်က အင်အယ်လ်ဒီနဲ့ အတိုက်အခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ကန့်ကွက်မဲ ပေးကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဟုတ်ပါ တယ်။
ဒုတိယအုပ်စုက ကြံ့ဖွတ်နဲ့အပေါင်းအပါတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ထောက်ခံမဲပေးကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရာခိုင်နှုံးအ တော်များများ မမှန်ဘူးဆိုတာ သေသေချာချာသိပေမဲ့ အတိုင်းအတာတရပ်အထိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာမို့ ငြင်းချက် မထုတ်တော့ပါ ဘူး။
အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အုပ်စုအဖြစ်နဲ့ ဆရာအလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးထားတဲ့ တတိယအုပ်စုကို စိတ်ဝင်စားမိပါ တယ်၊ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်အုပ်စုလို့ ဆိုလေတော့ အထင်မသေးရဲပါဘူး။ တတိယအုပ်စုဆိုပြီး ဆရာပေးလိုက်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတွေက မသိင်္ဂီရယ်၊ ပြည်တွင်းက အကြီးတန်းသတင်းစာဆရာတယောက်ရယ်၊ စစ်တပ်မိသားစုတွေရယ် ဖြစ်နေပါ တယ်၊။ တဖန် ဒီအုပ်စုက အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အုပ်စုဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ထောက်ခံမဲပေးကြလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ထင်ဟပ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ဆရာက ထောက်ခံကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတရပ်ဟာ လူတွေကြားမှာ ဖြစ်နေ တယ်။ လူတချို့မှာ ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းက ပညာတတ်တွေမှာ ဖြစ်နေတယ်။ စစ်တပ်မိသားစုတွေမှာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပညာရှိပီသစွာ လိုသလိုညှပ်ပြီး ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
ဆရာထောက်ပြတဲ့ အုပ်စုသုံးအုပ်စုထဲမှာ အတိုက်အခံပါတီဝင်တွေ မဟုတ်တဲ့၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ မဟုတ်တဲ့၊ မသိင်္ဂီ မဟုတ်တဲ့၊ ပြည်တွင်းက အကြီးတန်းစာနယ်ဇင်းသမား မဟုတ်တဲ့၊ စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေ မဟုတ်တဲ့၊ သန်းပေါင်းများစွာသော သာမန် မိဘပြည်သူတွေကို ဘယ်နေရာမှ ကျနော်ရှာမတွေ့ပါဘူး။ ကြံ့ဖွတ်လို၊ မသိင်္ဂီလို၊ အကြီးတန်းစာနယ်ဇင်းသမားလို၊ စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေလို (ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း ပြန်ကိုးကားရရင်) တနည်းနည်းနဲ့ သက်သာရာရ အသက်ရှူပေါက်ချောင်ရာ ကို မရှာဘဲ၊ စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ညံ့ဖျင်းနုံချာတဲ့ အုပ်ချုပ်မှု၊ ဖိနှိပ်မှုကို အဆိုးဝါးဆုံး ခံနေရတဲ့၊ နေထွက်က နေ၀င်စားရေး၊ နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးတွေအတွက် သောကပင်လယ်တွေဝေနေတဲ့၊ စစ်တပ်ကိုကြောက်ရလို့ တအိမ်တယောက် ထွက်ပြီး ထမင်းအငတ်ခံ လုပ်အားပေးပွဲတွေ၊ ထောက်ခံပွဲတွေတက်နေရတဲ့ သာမန် မိဘပြည်သူတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ဆရာ တယောက် ပညာလျှံပြီး ထည့်တွက်ဖို့ မေ့လျော့သွားခဲ့လေသလားလို့ တွေးမိပါတယ်၊ တကယ်တော့ ကြံ့ဖွတ်လို၊ မသိင်္ဂီလို၊ အ ကြီးတန်း စာနယ်ဇင်းသမားလို၊ စစ်တပ်မိသားစုဝင်လို လူတွေထဲမှာ စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ အလိမ်အညာကိုမခံဘဲ ပြတ်ပြတ်သား သား ဆန့်ကျင်မဲပေးကြမယ့်သူတွေ အများအပြား အသေအချာရှိနေတာကိုလည်း၊ ဆရာ တမင်မသိချင်ယောင် ဆောင်ထားခဲ့ ပါတယ်။
အခုအခါမှာ အတိုက်အခံက သုညအဆင့်မှာဖြစ်နေပြီး စစ်တပ်က တစ်ရာရာနှုံးပိုင်စိုးထားတာမို့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုထောက် ခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သုညထက်ပိုသောတစုံတစ်ရာကို မျှဝေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားရဲ့အမြင်ကို ဆရာ အလေးထား ထောက်ပြဆွေးနွေးသွားပါတယ်၊ ဒီစာနယ်ဇင်းသမားရဲ့အမြင်ကိုပဲ လူတွေကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမြင်လို့ ဆရာက ထပ်ဆင့် အတည်ပြု ဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ။ ဒီစာနယ်ဇင်းသမားရဲ့အမြင်က ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ တထပ်တည်းကျတူနေတယ်လို့ ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြောနိုင်ပါသလဲ၊ တကယ်တူတာလား။ ဆရာက တူစေချင်တာလား။ ဆရာ ရိုးသားပါရဲ့လား။
အခုအခါမှာ အာဏာကိုလိုသလိုသုံးပြီး ထင်သလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြင့် သူတို့လုပ်ချင်ရာကို အရင်အတိုင်း ဒုံရင်းဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ အခြေခံဥပဒေကြီးနဲ့ အကာအကွယ်ပေးလိုက်ရတော့မှာမို့ တရား စွဲလို့လည်းမရ၊ လူထုခုံရုံးလည်းမရှိ၊ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးလည်းပျောက်နဲ့ ချိုတပ်ပေးလိုက်တဲ့မြင်းလို ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်သွား မှာကို ဆရာတွေးပူဟန် မရှိပါဘူး။ အရင်တုန်းက အာဏာသိမ်းရင် ဥပဒေကိုဖျက်ပြီး အာဏာသိမ်းရတတ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်က အခုဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုလိုက်ရင် ဥပဒေအရ အာဏာသိမ်းရတာဖြစ်သွားပြီး ဒါကို ကန့်ကွက်တဲ့၊ ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူ တွေကို သတ်ချင်သလောက်သတ် တရားစွဲခွင့်မရှိတော့မှာကို ဆရာစိုးရိမ်ပုံမပြပါဘူး။ အခုနေအခါမှာ ဘယ်လိုမှမရနိုင်တဲ့ တရားဝင် လူသတ်လိုင်စင်ကို လာမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအရ စစ်တပ်က တဦးတည်းမူပိုင်ရသွားမှာကို ဆရာမြင်ပုံမရပါဘူး။ စစ်တပ် တမတ်သား က တနိုင်ငံလုံး ကို ထင်သလိုချယ်လှယ်ပြီး စစ်တပ်သဘောမတူဘဲ ဘာမှပြောင်းလို့ မရတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို တိုးတက်တဲ့ မူတရပ်လို့ ပြည်သူကို ဆရာက သတင်းစကားပေး ချင်ပုံရပါတယ်။
ဆွေးနွေးချက်တခုလုံးကို သေသေချာချာ ဆန်းစစ်လိုက်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်မဖြစ်သွားမှာကို ဆရာ အလွန်အ မင်း ပူပန်နေပုံရပါတယ။ ဆရာ့သောကနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့သောကနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားကြီးရဲ့ သောကတွေဟာ တထပ် တည်းကျပြီး တူနေတာက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ။ အကျိုးစီးပွားများ တူနေလေလို့လား။
အင်အယ်လ်ဒီလုပ်ဆောင်သမျှကို ဆရာက နအဖလိုဘဲ ဘယ်သောအခါကမှ လုံလောက်တယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ အင်အယ်လ်ဒီ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဖိနှိပ်သူနဲ့ ဖိနှိပ်ခံရသူကို တတန်းတည်း ထားတတ်တာဟာ အမြဲမမှန် နိုင်ပါဘူး။ အခုလည်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ကန့်ကွက်ပြီးရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ အင်အယ်လ်ဒီက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောနိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး ဆရာက စာနယ်ဇင်းသမားကြီးရဲ့ လက်ကိုငှားပြီး ခုတ်ပြန်ပါတယ။
ပညာရှင်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာ့ကိုမေးခွန်းတခု မေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ အာဏာရှင်က အာဏာကို တစ်ရာရာ ခိုင်နှုံး ရယူထားပြီး အတိုက်အခံက သုညဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အာဏာရှင်ကသာ ရွှေ့ကွက်တွေကို ဦးဆောင်နိုင်တယ် ဆိုတာ ဆရာဘာလို့ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ရတာလဲ။ အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ အတိုက်အခံလုပ်သူက ဘာပြီးရင် ဘာလာမယ်ဆို တာ ကို ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်တာမို့ အချို့အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်မချပြနိုင်တာကို ဆရာဘာလို့ မစာနာနိုင်၊ နားလည်မှု မပေးနိုင်ရတာလဲ။
ဒီဗွီဘီဟာ အမည်အရကိုယ်က စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် ပြည်သူတွေကို သတင်းမှန် အချက်အလက်မှန်တွေကို ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ။ နအဖက သူတို့စိတ်ဿကိက်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ကို အတည်ပြုပေးနိုင်အောင် ပြည်သူလူထုကို ချော့လိုက်၊ ချောက်လိုက်လုပ်နေတာကို ဒီဗွီဘီက မသိဘူးဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလား။ ပြည်သူလူထုက စစ်ကျွန်ဖွဲ့စည်းပုံကို အမြင်ရှုတ်ထွေးပြီး အတည်ပြုလာအောင်၊ တခုတည်းသော အထင်ကရအတိုက် အခံပါတီ အင်အယ်လ်ဒီကို လူထုက အယုံအကြည်ကင်းမဲ့လာအောင်၊ အသေခံ၊ အသတ်ခံပြီး ကန့်ကွက်မဲပေးကြဖို့ သက် စွန့်ဆံဖျား ဿကိးစားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေ၊ အင်အယ်လ်ဒီတွေကို နောက်ကြောက ဓားနဲ့ထိုး သလို လိမ်မာပါးနပ်စွာ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ ဆရာဦးတင်မောင်သန်းကို ဒီဗွီဘီက စင်တင်ပေးပြီး စစ်ဗိုလ်တွေအဿကိက် ထောက်ခံမဲပေးဖို့ အော်နေတာ မရှက်ဘူးလား။
ကျုပ်တို့ဒီဗွီဘီက လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းဌာနဖြစ်တယ်၊ အမြင်အားလုံးကို တင်ပြမယ်ဆိုရင် လေးစားပါတယ်၊ မှန် လည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါဆို ကျုပ်အမြင်ကိုလည်း တင်ပြခွင့်ပြုပါ၊ ဆရာဦးတင်မောင်သန်း ကိုယ်တိုင်က ကျုပ်ဆောင်းပါးကို ကိုယ် တိုင်ဖတ်ပြီး ဒီဗွီဘီမှာ ရှင်းရဲပါသလား။
ဧပြီလ ၅၊ ၂၀၀၈
Posted by ရွှေဥသြ at 03:450comments
ရက်ပိုင်းမျှသာလိုတော့တဲ့ “ဆန္ဒခံယူပွဲ” အတွက် နအဖဟာ ခက်ခက်ခဲခဲ တက်လှမ်းနေတာ တွေ့နေရတယ်။ ခြိမ်း ခြောက်တာ ချော့မြူတာတွေအပြင် ဖမ်းချုပ်တာ၊ ချောင်းရိုက်တာတွေပါ
ဖောဖောသီသီကြီးလုပ်နေတယ်။ မရှက် - မကြောက် - မကွယ် - မ၀ှက်။
တဖက်မှာတော့ ပြည်သူလူထုတွေထဲမှာတော့ ကန့်ကွက်မဲထည့်ဖို့ ကြက်ခြေခတ်ဖို့ဆိုတဲ့ သဘောထားဟာ ပြတ် ပြတ်သားသားချမှတ်ပြီးသွားပြီ။ ဆိုလိုတာ ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြပြီ။ ဘယ်ကမှ ရှောင်ဖယ်လို့မရတော့။
“နအဖဟာ သူတို့နိုင်အောင် တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ညစ်မှာပဲ” ဆိုတဲ့စကားတွေ နေရာတကာမှာ ပေါ်နေတယ်။ (ဒီ လေသံကို သူတို့လူတွေကတဆင့် မသိမသာလွှင့်နေတာလဲ ရှိနိုင်တယ်။) ဟုတ်တယ်သူတို့ကတနည်းမက နည်းပေါင်းသောင်း ခြောက်ထောင် ကျင့်သုံးကြလိမ့်မယ်။ သံသယမရှိနဲ့။ အာဏာရသူဖက်က လက်နက်နဲ့ အာဏာနဲ့ပေါင်းပြီး ညစ်တာဖြစ်တဲ့အ တွက် သူတို့က နိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်။ ဒါမဆန်းဘူး။ တိုက်ပွဲတရာ အောင်ပွဲတရာဆိုတာ နာေးထာင်လို့သာ ကောင်းပြီး လက်တွေ့မှာမရှိဘူး၊ ကိုယ်တိုက်ချင်တဲ့ ဂွင်၊ ကိုယ်တိုင်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ရရင် တမျိုးဖြစ် တယ်။ ဒီတခါ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာသံဃာ့ အရေးအခင်းကြီးမှာ အကြီးအကျယ်အထိနာသွားတဲ့ နအဖဟာ နိုင်ငံရေးလက်ဦးမှု ရယူရေးအတွက် ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုကဖက်ပြောရရင် ဒီတပွဲဟာ ကိုယ်ကခံစစ်ကနေ လက်ဦးမှုရအောင် ပြန်လုပ်ရတာ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာစစ်ရေးတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနဲ့ စစ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ မတူတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ စစ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ စစ်ရှုံးရင် လူပါ၊ နယ်မြေပါဆုံးရှုံးသွားတာမို့ နာလံမထူအောင် ဖြစ်တတ်တယ်။ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာ အဲဒီလို အကျအဆုံးမရှိအောင် တိုက်လို့ရတယ်။ ဒီတချီတိုက်ပွဲရဲ့ ထူးခြားမှုတခုကိုက ပြည်သူတွေဖက်က အရင်းအနှီးနည်းနည်းနဲ့ နအဖရဲ့ မသမာမှုကို ဖွင့်ချနိုင်တာ၊ သူတို့ချင်းကွဲလွဲမှုကို ပိုနက်ရှိုင်းစေတာ ဖြစ်တယ်။
ဒီတိုက်ပွဲမှာ နအဖက ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဖက်က အခြေအနေကောင်းလှလို့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့အဖို့ပြောရရင် ဒါဟာ ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ တောင်ကုန်းတကုန်း ရယူရေးတိုက်ပွဲသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီခြေလှမ်းကို လှမ်းဖို့အတွက် နအဖထဲမှာ အကြာကြီး ပြင်ဆင်ချိန်ဆနေတဲ့ကြားကနေ နောက်ဆုံးမှာ စွတ်ရွတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ သူ့အပါးတော်မြဲတွေက ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ကြေငြာပြီးမှ တခြားနအဖအဖွဲ့ဝင်တွေကို အသိပေးအကောင်အထည် ဖော်ခိုင်းကြတယ်။ တကယ်တော့ စစ်အုပ်စုတခုဆိုတာ ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သူ့ရဲ့အတွင်းစည်းဝိုင်းသာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်မှာဆိုရင် ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က အနည်းစုလေးသာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့အထဲမှာ ဒီမိုကရေစီမရှိဘူး။ ဗိုလ်သန်းရွှေလက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်ရတာ။ ဒါကြောင့် ဒီတပွဲဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ အရှက်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နေတာမို့ သူ့လက်စွဲတွေဟာ အပြတ်ကြမ်းရမ်းလုပ်ကိုင်နေကြတယ်။
အခုလာတော့မယ့် ဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေအစုက စွတ်ရွတ်လုပ်ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အကုန်အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်။ ဆန္ဒခံယူပွဲကို နောက်သုံးလမှာ ကျင်းပမယ်ပြောတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းဆိုတာက စာအုပ်ဖြစ်မလာသေးဘူး။ စာအုပ်ရယ်လို့ ရိုက်ထွက်လာတော့လဲ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်နေတယ်။ မှားတာမှ စာရိုက်စာစီမှားတာ မဟုတ်ဘူး။ စာရိုက်စာစီမှားတာဆိုရင် စာလုံးမှားတာပဲ ဖြစ်မယ်။ အခုဟာက ၀ါကျလိုက်တွေ မှားနေတာ။ မှားတာမှ အယူအဆအရ ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်နေအောင် မှားတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ချင်းမှ ပြတ်အောင်ဆွေးနွေးလိုက်ကြရရဲ့လား စဉ်းစားစရာပဲ။ ဒါမှမဟုတ်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရော အသေအချာဖတ်ကြရဲ့လား။
ဘာပဲပြောပြော ဒီတချီမှာလဲ နအဖအဖို့ အင်မတန်ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း လုပ်နေရတာတွေကို မြင်နေရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဝေဖန်ဆန့်ကျင်သူတွေကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူမလိုလိုပြောပေမယ့် အခု အရေးမယူရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြည်သူတွေက ဗြောင်ဆန့်ကျင်၊ ဟားတိုက်ပြောနေကြတယ်။ ဒီအစား နအဖဟာ တရားမဲ့ ချောင်းရိုက်တာ၊ ဗြောင်ရိုက်တာ၊ ကားနဲ့တိုက်တာတွေ လုပ်နေတယ်။ တပြည်လုံးကို စည်းရုံးတာကနည်းနည်း၊ ခြိမ်းခြောက်တာကများများ လုပ်နေတယ်။ ရဲဆိုတာကလဲ ဗုံးခွဲတာဖမ်းမမိ၊ လူသတ်တာ၊ လူရိုက်တာအမှုမဖွင့်နဲ့၊ ပေထိုင်နေတယ်။ မီးသတ်က မီးမသတ်၊ လူသတ်နေတယ်။ စွမ်းအားရှင်ဆိုတာတွေက လက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ် စွမ်းအားတွေ အမျိုးမျိုးပြနေကြတယ်။ နအဖရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲဟာ မင်းမဲ့စိုးမဲ့ နိုင်ငံတခုမှာကျင်းပတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်မယ်။
တတိုင်းပြည်လုံးကို ဧရာမစစ်တပ်ကြီးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး အနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်သလိုပဲ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ စွမ်းအားရှင်ဆိုတာတွေကိုလဲ အရေအတွက် ဂဏန်းအကြီးကြီးပြပြီး တပြည်လုံးကို ခြိမ်းခြောက်ပြန်တယ်။ တချို့မသိနားမလည်သူက ယုံပြီးကြောက်ရှာကြတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီဂဏန်းတွေကို အသုံးချပြီး နအဖရဲ့ခွင်ထဲကို မောင်းပို့ကြတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်က လူတွေလို ဒါလောက်တာရှည် တထိတ်ထိတ် တလန့်လန့် အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရှိမှရှိပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ။
တဖက်ကပြောရင်လဲ ဒီနိုင်ငံသားတွေလောက် အမှားအမှန်ခွဲခြားတတ်တာ၊ သတ္တိရှိတာ ကမ္ဘာမှာရှားတယ်။ ဒီတခါ နအဖရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲဟာ နအဖဖက်ကစတဲ့ ထိုးစစ်ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် ဒီလိုပြည်သူလူထုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမို့ သတို့တတွေ ကသောင်းကနင်း၊ မရှက်နိုင်၊ မကြောက်နိုင် လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ စိုးရိမ်နေ၊ ကြောက်ရွံ့နေတာဟာ သူတို့ပဲဖြစ်တယ်။
ဒီလိုအခါမှာ နအဖက နည်းမျိုးစုံနဲ့ညစ်မှာမို့ သူတို့နိုင်မှာပဲလို့ တွေးပူနေစရာ မလိုဘူး။ သူတို့ မုချဒီလိုလုပ်မှာပဲ။ သူတို့က ထိုးစစ်ဆင်လာတာကို ရင်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအဖို့ ကိုယ့်ဖက်က အကျအဆုံးနည်းနည်းနဲ့ သူတို့ကို နိုင်ငံရေးအရ ထိထိရောက်ရောက် ထိုးနှက်နိုင်ရင်၊ နောက်ပြီး သူတို့တွင်းမကျေလည်မှုတွေ ပိုများပြားစေနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီတိုက်ပွဲဟာ နိုင်ပြီပဲ။ ဒါ့အပြင် အခြေအနေပေးရင် ဒီထက်ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတွေတောင် ရနိုင်သေးတယ်။ ကိုယ့်ဖက်က လောဘကြီးလို့ မဖြစ်ဘူး။ သူ့အမှားတွေ များသထက်များလာအောင် ဖန်တီးရမယ်။ ကိုယ့်အတွက် တပ်လေ့ကျင့်ရေးတခုလို သဘောထားသင့်တယ်။ ပြည်သူတွေအဖို့ ဒီတခါဟာ တိုက်ပွဲနည်းမျိုးပေါင်းစုံကို တိုက်နိုင်၊ တိုက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတခုပါ။ ဒီတိုက်ပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ လူထုကြီးဟာ ကြောက်သွားတာ မဖြစ်ဘို့နဲ့ သူ့အကြပ်အတည်းက ကိုယ့်အကြပ်အတည်းဖြစ်မသွားဘို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။
နအဖစစ်အုပ်စုကို ခြေလှမ်းရှိရှိနဲ့ တလုပ်ချင်းဝါးစားသွားမယ့် သဘောထားချမှတ်ထားရမယ်။
Posted by ရွှေဥသြ at 09:480comments
ကျွန်ုပ်တို့စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနိုင်ငံရေးပါတီများက အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၁။ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ မေလ (၁၀) ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
အခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်သဘောပေါက်ကာ မိမိတို့၏ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဖော်ထုတ်ပြသကြပါရန်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၀၈ - ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်သူသို့ပန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များပါကိစ္စရပ်များကိုလည်း တခဲတနက်ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက် ကြပါရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
၂။ ယခုဆန္ဒခံယူမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းသည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များက ရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်၊ စစ်တပ်က အဓိကအာဏာအရပ်ရပ် ကို ချုပ်ကိုင်ထားမည့် ဗဟိုကချုပ်ကိုင်သော အစိုးရပုံစံသာဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရပြည့်ဝသည့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကိုလည်း မဖော်ဆောင်နိုင်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူလူထုသည် ၄င်းတို့နှင့် ထိုက်တန်သော အစိုးရကိုသာရရှိသည်ဆိုသည့် နိုင်ငံရေး အဆိုအမိန့်အရ နိုင်ငံရေးအသိ၊ နိုင်ငံရေးသတိရှိသူတိုင်းက မိမိတို့၏ ဆန္ဒမဲတစ်ပြားစီဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ပို့ ဆောင်ကာ သမိုင်းမှတ်ကျောက်တင်ကြပါရန် ထပ်မံတိုက်တွန်းအပ် ပါသည်။
၃။ မြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက အာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်ကြမည်ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ ဆန္ဒအမှန်ကိုထုတ်ဖော်ခြင်းကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ မည်ကို စိုးရွံ့ရန်မလို။ စိုးရွံ့မှုကြောင့်ဆန္ဒအမှန်ကို မျိုသိပ်ခြင်း၊ မဲရုံသို့သွားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကြားနေခြင်းတို့သည် ရလဒ်ဆိုးများကို သွယ်ဝိုက်ထောက်ခံရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုဆိုးရွားခါးသီးသော အနာဂတ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ကို အထူးသတိချပ်ရန်လည်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက ၂၀၀၈ - ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေအခန်း (၈)၊ ပုဒ်မ (၂၂)၊ ပိုဒ်ခွဲ (က)၊ အငယ် (၁) အရ မဲရုံပိတ်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် (၁၀) ဦးထက်မနည်း သော ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတို့၏ ရှေ့ မှောက်တွင် ဆန္ဒမဲများကိုရေတွက်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါ၍ ပြည်သူတို့အနေဖြင့် မဲရုံဖွင့်ချိန်နှင့် ဆန္ဒမဲရေ တွက်ချိန်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင် စောင့်ကြည့်ကြပါရန်လည်း အလေးအနက်တိုက် တွန်းအပ်ပါသည်။
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃၀)ရက်
Posted by ရွှေဥသြ at 09:420comments
သူဘာလဲ ကိုယ်ဘာလဲ ဒီပွဲက အဆုံးအဖြတ်ပဲ
ဆရာမြသန်းတင့်(၁၉၂၉ - ၁၉၉၈)ကွယ်လွန်ခြင်း(၁၀)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ
(ပြည်တွင်းသို့ပေးစာ (၁) (ညိုစိန်ဝင်း))
(၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၃) ရက်)
(အနိုင်မခံ (ဗိုလ်ချုပ် - ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ကဗျာ))
(ကြေကွဲခြင်းများစွာဖြင့် ကြိုလိုက်ရသော နှစ်သစ်)
(ဇီးရိုးအာဝါ (သို့) နောက်ဆုံးပိတ်တိုက်ပွဲ)
(အ ... ညီလာခံ)
(အမေနဲ့သား (သို့) “သ” ၀ဂ်ကထာ)
(၉၂ ပြည့်မွေးသမိခင်သို့ ပေးစာတစောင်)
(ခင်ဗျား ..... ထပါ)
ရန်သူကို ရန်သူလို့ပဲခေါ်မယ်၊ ဒါကိုတချို့က သိပ်မကြိုက်ကြဘူး။ မတတ်နိုင်ဘူး မကြိုက်ရင်လဲသေလိုက်ကြ ရန်သူကို ရန်သူလို့ပဲခေါ်မယ်။
ပြည်တွင်းမှာရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုပေါ်လာတာဟာ ပြည်ပကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်။
ငါတို့မျက်လုံးတွေ ကန်းသင့်ရင် ...
ကောင်းကင်ကိုဘလော့မှ ၄၂၀ လုပ်ထားသည်။
ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်၏ ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ
(ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ (ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်)
(ကျောင်းသား - ထောင် - တော်လှန်ရေးသမား)
(ဗဟိန်း သို့မဟုတ် ညီညွတ်ရေးဗိသုကာ)
(ဗန်းမော်တင်အောင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၉ နှစ်မြောက် ဂုဏ်ပြုခြင်း)
ဖိုးသံ (လူထု)၏ စာမျက်နှာများ
(နအဖက ဗမာပြည်သူတွေကို စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ)
(ပြည်တွင်း ပြည်ပပေါင်းစပ်ခြင်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု)
(ပဒိုမန်းရှာ (သို့မဟုတ်) ဧရာဝတီမှ ဒေါနရေဆန်)
(ဆရာစွမ်း (သို့မဟုတ်) အနီနဲ့အပြာ နောက်ခံကားချပ်ပေါ်က ထက်မြက်တဲ့ခေါ်သံရှင်)
(လူထုအတွက် လူထုဖက်က လူထုဒေါ်အမာ)
ဘ၀မှာ ပွဲကြည့်သူမရှိဘူး။ (ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်)
(နာဂစ်၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့် ဗီသိုဗင်) Nargis i...